Njengedangabane uyavuka uMasipala uLundi – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Njengedangabane uyavuka uMasipala uLundi
Njengedangabane uyavuka uMasipala uLundi
UMnu uNkosenye Godfrey Zulu
KWAKE kwakhona isikhathi lapho kwakunomuzwa wokuthi isinqumo sokususa iSishayamthetho saKwaZulu-Natal oLundi siye eMgungundlovu kusho isiphetho ngendawo yasoLundi. Kwabaningi lo muzwa wawungenxa yokwesabela ukufuduka kwabantu namakhono belandela umnotho nokwakungasho inhlekelele kuleli dolobha elisemakhaya.
Nokho ukukhuluma sekungokunye njengoba lo Masipala uqhubeka nokuba sematheni ngezinto ezinhle nezibukeka zizoyisa phambili umnotho wendawo. Konke lokhu okuhle okutuswayo yindlela lo Masipala ophethwe ngayo nokuyinto efakazelwe nayiHhovisi likaNdunankulu wesifundazwe uMhlonishwa uWillies Mchunu.
Ngesonto eledlule mhla zingama-20 kwephezulu emcimbini obuseThekwini, uMkhandlu wasoLundi uchonywe uphaphe lwegwalagwala ngesikhathi unikwa indondo iPremiers Excellence Award. ULundi luthole indondo yokuba ngumasipala ophethwe kahle kakhulu KwaZulu-Natal, waphinda wathola enye yokubonga iMeneja yawo, okunguMnu uNkosenye Godfrey Zulu waba imeneja evelele esifundazweni.
UZulu usebesezikhundleni zokuphatha iminyaka eli-12 nokwenza amagalelo akhe oLundi angangatshazwa ubuholi obuphethe uMkhandlu.
Kwenzeka lokhu nje, lo Masipala ukwazile ukwehlisa amaphaphu ezakhamuzini zawo ngodaba obeluyinzukazikeyi lwesikweletu sikagesi sezigidi ezingama-R56.
UZulu uke waveza ukuthi banqume ukuthi bavumelane nenkampani ekhiqiza ugesi kuleli okungu-Eskom ukuba kukhokhwe lesi sikweletu. Kubuye kwavela ukuthi no-Eskom ubevele ekweleta lo Mkhandlu izigidi zamarandi ngokusebenzisa inqalasizinda yawo ukufakela imizi yabantu ugesi.
Kumanje uLundi luzibophezele ekutheni lukhokhe lesi sikweletu iminyaka emithathu kanti imali okuvunyelwene ngayo ezokhokhwa ngenyanga, ingaphezulu kancane kwesigidi samarandi.
UZulu exoxa neBAYEDE uthe kube yinto enkulu kubo ukuthi banqobe lezi zindondo ngoba kubakhombisa ukuthi imisebenzi yabo iyabonakala.
“Empeleni sekuyinto ejwayelekile lapha oLundi ukuthi sinqobe izindondo ezisuke zimayelana nokusebenza ngokuzikhandla. Ngakho namanje siyakhuthazeka ngokwenzekile ngoba kuyakhombisa ukuthi esikwenzayo akugcini nje ngokubonwa abantu abasakhele kodwa noHulumeni omkhulu uyakubona,” kusho uZulu.
Kulo mkhakha anqobe kuwo uZulu ubeqokwe nabanye omakadebona kwezokuphatha ukunguMnu uDD Naidoo, ophethe Ugu noMnu uZweliphansi Sikhosana waseMzimkhulu.
Uqhube wathi ngesikhathi beqokwa babengazi ngoba babona kufika oSolwazi basemaNyuvesi bezobavakashela, maqede bafuna yonke imininingwane yokusebenza kukaMasipala. Uthe ngesikhathi kwenzeka lokhu kwabathatha cishe imizuzu engama-30 ekubeni kweminye imikhandlu lo msebenzi uthatha amahora amabili kuya phezulu.
“Kuthe kusenjalo sezwa sekuthiwa sesiqokelwe izindondo zeHhovisi likaNdunankulu. Ngebhadi emcimbini obukhona angikwazanga ukuya ngenxa yokuthi ngangiyothweswa iziqu zomthetho (Masters), eNyuvesi yase-United Kingdom. Nokho umuntu uthokoze kakhulu ngoba sekusijwayele ukwenza kahle uma siholwa uHulumeni wesifundazwe. Ngikhuluma nje selokhu kwathi nhlo kulo Mkhandlu siwola izindondo zokusebenza kahle,” kusho uZulu. Phakathi kwezinye izinto uMkhandlu onconywe ngazo kube ukuhambisa izidingo kubantu, ukuba nezinhlelo ezingenzeleli ekuqashweni kwabasebenzi ngasophikweni lakwaNdabazabantu, ukusebenzisa imali ngendlela engenagcobho, ukugwema ukusebenzisa amaconsultant.
Okunye ukusebenzisa izinhlaka zangaphakathi ukucwaninga amabhuku nokunye okuthinta ukusebenza kwezimali. Uthe akugcinanga lapho kodwa ukusebenza ngokuzikhandla bebambisene nosomabhizinisi basoLundi nabaseMahlabathini ukunxenxa abatshaliozimali kubasebenzele.
Uqhube wathi kumanje uLundi seluyethenjwa osomabhizinisi bezitolo ezinkulu eNingizimu Afrika ngoba bathutheleka ngobuningi kanti usumkhulu umehluko uma ulubuka, uqhathanisa neminyaka emihlanu edlule.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu uWillies Mchunu, uhalalisela abasebenzi, iminyango kaHulumeni kanye nomasipala abenze kahle kuma Premier Service Excellence Awards.
Unxuse omasipala ukuba bakhumbule ukuthi njengoba kuzophela unyaka okungene ngawo ubuholi obusha, umphakathi nawo ubheke lukhulu ngakho kumele basebenze ngokuzikhandla.
“Okubaluleke kakhulu ukuthi kufanele nonke nibeke eceleni ukuthi nimele ziphi izinhlangano zepolitiki kodwa nisebenzisane ukuphucula izimpilo zabantu,” kusho uMchunu.
Sibungaza i-Afrika emibalabala